မီးရထားလမ်းကြောင်းမြေပုံ YHT TCDD နှင့်လက်ရှိ Lines 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီမီးရထားလမ်းကြောင်းမြေပုံ YHT TCDD နှင့်လက်ရှိ Lines 2019
05 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, Maps, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 1
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများ 1 map
TCDD မီးရထားလမ်းကြောင်းများနှင့်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထား (YHT) လိုင်း 2019 မြေပုံနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD), တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဖေါ်ပြခြင်းရထားလမ်းလိုင်းများ 2019-date ဖြစ်အောင်မြေပုံ ငါ rayhaber.coမှာ။
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) ၏သမ္မတနိုင်ငံ, သင်တို့နှင့်အတူရှိသူတို့အားဝေမျှဖို့လက်ရှိမြေပုံစာမျက်နှာ။ Maps ကို TCDD ကပြင်ဆင်နေကြသည်ရထားလမ်းလမ်းကြောင်းများဖေါ်ပြခြင်း 2019 တစ်နှစ်-to-date ဖြစ်အောင်မြေပုံဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူမျှဝေအဆိုပါရထားလမ်းနှင့်ကားလမ်းလမ်းကြောင်းများသင်ယူဖို့လိုခငျြသောသူတို့အဘို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ဒါကဖိုရမ်တစ်ခု။ အသစ်ကမီးရထားလမ်းပြသသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ site အတွင်းရှိ TCDD ထုတ်ဝေသောမြေပုံများအားသင်တို့နှင့်အတူရှိသူတို့အားဝေမျှပါလိမ့်မယ်။
high resolution ကတော့အတွက်ကြည့်ရှုရန်မြေပုံပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
TCDD ဒေသန္တရရုံး MAP
TCDD အစ္စတန်ဘူလ် 1 ။ တိုင်းဒေသကြီး, တူရကီ2။ တိုင်းဒေသကြီး, Izmir3။ ဧရိယာ Sivas4။ ခရိုင် Malatya5။6၏ပြည်နယ်များ။ ဒေသတွင်းနှင့် Afyonkarahisar7။ တူရကီအတွက်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုအပါအဝင်7ကိုလည်းပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံ YHT ဧရိယာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရှိပါတယ်။
စုစုပေါင်းကသူတို့တာဝန်ယူနေသော၏ 8 အပိုင်း, ပါဝင်ပါသည်အောက်ပါမြေပုံမှာပြထားတဲ့နေကြသည်: TCDD ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု၏နယ်နိမိတ်ဖေါ်ပြခြင်းမြေပုံကျနော်တို့သင်တို့နှင့်အတူအမျှဝေပါ။
တူရကီအမြန်ရထား (YHT) LINE သည့် MAP
တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးတူရကီ 2009 အတွက် - Eskisehir lKm အကြားကသူ့မြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်း 245, ယနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီလ - 2019 ၏အဖြစ်) Konya နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်စုစုပေါင်းလိုင်းအရှည် xnumxkm'y ကူးခဲ့ကြသည်။ တူရကီရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းလိုင်းများကျနော်တို့မြေပုံပေါ်တွင်သင်နှင့်အတူဝေမျှခရီးသည်ဆက်သွယ်မှုသယ်ဆောင်ပေးသောမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများနှင့်ဘတ်စ်ကားလိုင်းများဆောက်လုပ်ရေး။
YHT Hatları Haritası ve Yapımı Devam Eden YHT Hatları Haritası
ကြောင့် Eskisehir လမ်းရထားလိုင်းများအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်တချို့ဘတ်စ်ကားနှင့်မီနီဘတ်စ်လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်တိုးချဲ့ 12 / 09 / 2012 ဓါတ်ရထားလိုင်းများကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်Çamlıca-ပါတိတ်နဲ့အလုပ်သမား-71 မှအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်တိုးချဲ့တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဘတ်စ်ကားနှင့် minibuses ၏အိမ်များအဆိုပါခရီးစဉ်မှယာယီအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ မြို့တော် 16, 16, 17, အနက်ရောင်နဲ့အနီရောင် 38 နှင့်အတူမြှို့နယ်, အနီရောင် 77, အနက်ရောင် 15, အပြာ 25, 25, 43, အနက်ရောင် 48, အပြာ 16, အနက်ရောင် 7, 15, 25 ဘတ်စ်ကားနှင့် 44 ကနေကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်နှင့် 57 အရေအတွက်ကမီနီဘတ်စ်၏လမ်းကြောင်း ဒါဟာယာယီကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ကြေညာချက်၏ဆောက်လုပ်ရေးအောက်မှာလုပ်ပြောင်းလဲမှုများဓါတ်ရထားလိုင်းများတိုးချဲ့မြူနီစီပယ်အောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်: "ယာယီအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘတ်စ်ကားနှင့်မီနီဘတ်စ်လမ်းကြောင်းအတွက်စေ့စပ် ...
နယူးမြေအောက်ရထားလိုင်းများနှင့်လမ်းကြောင်းများအစ္စတန်ဘူလ်နှင့် havaray 12 / 04 / 2012 အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်စိတ်ပိုင်းဖြတ်နှင့်အသစ်မြေအောက်ရထားလိုင်းများနှင့်လမ်းကြောင်းများ havaray ခဲ့သည်။ အခြားသူတွေ ediliiy စီမံကိန်းကို၎င်းတို့၏လေ့လာမှုများဆက်လက်နေစဉ်စီမံကိန်းအချို့ကိုဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်လေးနှစ်ဖက်နှင့်အတူရည်မှန်းချက်ရက်သံကွက်။ အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အသွားအလာကိုစေ့စပ်တဲ့အခါမှာလိုင်းများသမိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပခံရဖို့ Beyoglu အသစ်သောမက်ထရိုနှင့် havaray လိုင်းများမျှော်လင့် - Sisli havaray လိုင်း: တထောင်ကလူ Dudullu 5.8 - ဘော့ရထားလိုင်း: တစ်နာရီလျှင် 33 ကီလိုမီတာတစ်နာရီလျှင် 14 ကီလိုမီတာ: 70 တထောင်ခရီးသည် Pendik - Sabiha Gokcen - Sultanbeyli: 17 ကီလိုမီတာ - နာရီအလိုက်: 70 Zeytinburnu တထောင်ခရီးသည် - b.paşa -GOP - Eyup - k.h သည်အထိ - Besiktas ...
ဥရောပ Ro-La ရထားလမ်းကြောင်းမြေပုံနှင့်ထံမှတူရကီ 04 / 03 / 2012 Ro-La သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Modes သာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အခြေခံအဆောက်အအုံဖန်တီးလျှောက်လွှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပါတယ်ရှောက်သွားပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်သုံးနှစ်အဘို့ပြင်းထန်စွာအလုပ်လုပ်အဖြစ်အနာဂတ်မှာဖို့မရှိမဖြစ်သောအရာ TCDD ။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, TCDD နှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယား, ရိုမေးနီးယား, ဆားဘီးယား-မွန်တီနီဂရိုး, ဆလိုဗေးနီး, UND နှင့်အတူဟန်ဂေရီမီးရထားအဖွဲ့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးလှံတံကိုလေ့လာမှုများအဖြစ်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုယ်စားလှယ်များ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေ၏ရလဒ်သကဲ့သို့၎င်း, အောက်ကလမ်းကြောင်း3(Wels သို့မဟုတ် Salzburg) ရက်နေ့တွင်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် ပူးပေါင်း. အစ္စတန်ဘူလ်၏ဥရောပ Ro-La သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး -Avustury ထံမှတူရကီအကြားဖြန့်ချိခံရဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တူရကီနှင့်ဥရောပအကြားကုန်တင်၏ ro-La သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထက်အခြားအခြားနည်းလမ်းအစပျိုးနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သော ro-La ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးကွန်တိန်နာ / Swapbody intermodal ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး, ...
နုကမ်းလှမ်းမှုကို၏ YHT-မြန်နှုန်းရထားလိုင်းစီမံကိန်းကို Maintenance နှင့်အတူသမားရိုးကျလိုင်းလိုင်းစုဆောင်းခဲ့ကြ 04 / 06 / 2014 မြန်နှုန်းရထားလိုင်းစီမံကိန်းစောင့်ရှောက်မှုတင်ဒါကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူ TCDD သမားရိုးကျ Lines YHT လိုင်း, နှစ်နှစ်စောင့်ရှောက်မှု၏ "TCDD သမားရိုးကျလိုင်းများမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများ YHT လိုင်းလုပ်ငန်းညွှန်ကြားမှုအထွေထွေတူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) စုဆောင်းစက်ယန္တရားစုစုပေါင်း 2650 km`lik လိုင်း2အစုံနဲ့ခဲ့ကြသည် နုကမ်းလှမ်းမှုကို၏ဗီဇာနှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူမှု "၏2နှစ်ပေါင်းမေလ 22 2014 ရက်အတွင်းစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, 1 18.734.470,30 ကုန်ကျစရိတ်တွေအကြောင်း A2 အဘို့အပေါင် A29.145.969,19 များအတွက် POUNDS အောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်, စုစုပေါင်း 47.880.439,49 ထိုကဲ့သို့သောလေလံနဲ့လေလံပါဝင်ကုမ္ပဏီများ (¨) POUNDS: Comsa အခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေး A1 A2 များအတွက်အဆိုပြုချက် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD သမားရိုးကျလိုင်းများမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများနှင့်အတူမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများစောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည် 28 / 03 / 2014 TCDD သမားရိုးကျလိုင်းများ, မြင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် TCDD သမားရိုးကျလိုင်းများ (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများနှင့်အတူမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှစ်နှစ်, တစ်ဦးစုစုပေါင်း 2650 စက်ပစ္စည်းများ၏လိုင်း2စုံ၏ကီလိုမီတာနှင့်2နှင့်အတူမြန်နှုန်းမြင့်လိုင်း၏စောင့်ရှောက်မှုယူလိမ့်မည် ဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူရေးအမှတ် 4734 19 နှစ်ပေါင်းများစွာအတူ built ကပြည်သူ့ဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 14230 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: စီးပွားရေး 06280 GARA ၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ ...
eskişehir Konya မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်းကြောင်းမြေပုံ
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား 2012 သည့် MAP
တိုးတက်မှုမြေပုံ YHT လိုင်း Making
မြေပုံ YHT လိုင်း
ကြောင့် Eskisehir လမ်းရထားလိုင်းများအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်တချို့ဘတ်စ်ကားနှင့်မီနီဘတ်စ်လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်တိုးချဲ့
ဥရောပ Ro-La ရထားလမ်းကြောင်းမြေပုံနှင့်ထံမှတူရကီ
နုကမ်းလှမ်းမှုကို၏ YHT-မြန်နှုန်းရထားလိုင်းစီမံကိန်းကို Maintenance နှင့်အတူသမားရိုးကျလိုင်းလိုင်းစုဆောင်းခဲ့ကြ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD သမားရိုးကျလိုင်းများမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများနှင့်အတူမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများစောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: TCDD သမားရိုးကျလိုင်းများသည်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားလိုင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုယူပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သိမ်းယူမှုအစီအစဉ်နှင့်လမ်းကြောင်းထုတ်လုပ်မှု Consultancy Services မှပစ္စည်းဝယ်ယူရေး၏လမ်းဆုံ